Fanadihadiana isan-tokantrano :: Mbola andrasana ny vokatra tena ofisialin’ny fanisam-bahoaka • AoRaha
Mihemotra. Amin’ny taona 2020 mihitsy vao ho fantatra ny vokatra feno natao tamin’ny fanisana ankapobeny ny mponina sy ny trano fonenanana, izay notanterahina tamin’ny volana jona 2018.
“Amin’ny volana janoary mihitsy vao mety ho fantatra izany. Nampihisatra ny asa ny fihenana an-daharan’ireo mpiasa nanatanteraka ny fandikana ny vokatra anaty solosaina”, hoy Romalahy Zefania Isaora, tale jeneralin’ny Ivon-toeram-pirenena misahana ny antontan’isa na ny Instat, teny Antananinarenina.
“Amin’ny volana avrily 2020 mihitsy vao mety ho vita ny asa rehetra mikasika an’io fanadihadiana io”, hoy kosa ny fanamafisana nataon’ny tompon’andraikitra iray hafa eo anivon’ny Instat ihany, omaly. Notsindriany fa: “ mbola maro ny asa miandry aorian’ny fanaovana an’io fandikana naoty amin’ny solosaina io”. “ Miditra amin’ny fanadiovana ny antontan’isa rehefa vita ny fandikana, avy eo miroso amin’ny fanaovana fandalinana mikasika an’ireo vokatra azo. Havoaka isaky ny lohahevitra tsirairay rahateo io valina fanadihadiana io”, hoy ny fanazavany.
Na eo aza ny voalaza fa fahasoratan’ny fikirakirana ny valin’ny fanadihadiana RGPH 3 dia nanamafy ny tale jeneralin’ny Instat fa misy fanisana vaovao indray hatao manomboka amin’ny volana janoary 2030.
Fotoam-pahavaratra :: Tsy mampiraika ny mponina eny amin’ ny faritra iva ny fiakaran’ny rano